Thread: Polymer Processing Techniques
Rep Power0Polymer Processing Techniques
In chemical engineering, it also study about plastic and rubber.
Among these, there are various kinds of polymer processing techniques.
(a) Extrusion-Blow molding
(b) Injection Blow Molding
(c) Stretch-Blow Molding
6.Compression and Transfer Molding
7.Rotational Molding The first three polymer processing techniques are more popular than others.
· Parts of infinite length can be produced
· Some parts, like blown film, can only be made with extrusion
· Extrusion isacontinuous process capable of very large production volumes · Most thermoplastics, and some thermosets can be extruded
· Since the dies contain no moving parts, only continuous cross sections can be manufactured
· Complex geometry cannot be produced
· Complicated feature can be very hard to produce because of difficulties in producingabalanced die
apply in food processing
Injection molding machine also known as presses, holds the mold in and components are shaped inside it. Presses are rated by tonnage, which expresses the clamping force that the machine can generated. This pressure keeps the mold closed during the process. Tonnage can vary from less than5tons to 6000 tons.
The injection molding equipment or machine has three basic components (functional units) (1) injection units (plasticator), (2) mold, and (3) clamping unit. The function of plasticator is to prepare the proper plastic melt and through the injection unit transfers the melt into the next component that is mold. The clamping system closes and opens the mold. The machine perform certain essential functions – 1.	Plasticizing: heating and melting of the plastic in the plasticator. 2.	Injection: injecting from the plasticator under pressureacontrolled volume shot of melt intoaclosed mold, with solidification of plastics beginning on the mold’s cavity wall.
3.	After filling: maintaining the injecited material under pressure foraspecified time to prevent back flow of melt and to compensate for the decrease in volume of melt during solidification.
4.	Cooling: cooling the thermoplastic (TP) molded part in the mold until it is sufficiently rigid to be ejected until it is sufficiently rigid to be ejected or heating: heating the thermoset (TS) molded part in the mold until it is sufficiently rigid to be ejected.
5.	Molded part release: opening the mold, ejecting the part, and closing the mold so it is ready to start the next cycle with the shot of melt.
1.	The mold is first closed as its two halves come together.
2.	The nozzle moves toward the mold, until the parts adjoin.
3.	The material is injected into the mold viaahole in the mold, called the sprue.
4.	The mold is cooled before the product is ready to be ejected.
5.	The material at the end of the screw is decompressed and the shot size of the material is metered.
6.	The mold opens.
7.	The part is ejected.
•	High production rates •	Design flexibility •	Repeatability within tolerances •	Can processawide range of materials •	Relatively low labor •	Little to no finishing of parts •	Minimum scrap losses Disadvantages
•	High initial equipment investment •	High startup and running costs possible •	Part must be designed for effective molding •	Accurate cost prediction for molding job is difficult Applications
It can apply from micro parts to large components such as bumpers and wheelie bins.
Containers, household goods, auto components, electronic parts, flower pots.
mold က ဈေးကြီးသော်လည်း injection molding ကိုအသုံးများပါတယ်.. အမျိုးမျိုးထုတ်လို့ ရလို့ ပါ.. ကျောင်းမှာ တစ်ခါနှစ်ခါလောက်တော့ practical လုပ်ဖူးပါတယ်.. machine က control လုပ်ရတာသိပ်မခက်ပါဘူး..
short-run or prototype products[/li]
[li]Poor material distribution: the wall thickness varies and is difficult to control
Consider finishing is required and considerable waste
the polymer has to heated twice, once to form the sheet (extrusion) and again during vacuum forming the range of shapes available is limited[/li]
Applications The largest application is for food packaging such as toiletries, pharmaceuticals, electronics.
Food related applications are meat trays, microwave and deep freeze containers, ice-cream and margarine tubs, snack tubs, sandwich packs and vending drink cups.
Other non-food applications include manufacturing collation trays and blister packaging.
[li]economical for small to medium production runs
no need for painting; the color and texture are formed in[/li]
1. The heated plastic sheet is clamped and sealed across the pressure box.
2. Control air pressure blows the bubble, giving the pre-stretch of 35-40%.
3. The plug is moved down into the bubble; air-pressure keeps the bubble and the plug contact.
4. The plug is lowered to its final position,avacuum is pulled between plug and sheet, and the pressure in the pressure box causes the sheet to take up the shape of the plug.
Applications Baths and shower trays, ski-boxes, refrigerator liners, parts of vehicle cabs, sandwich boxes, exterior shop signs
1. Extrusion-Blow Molding
low initial mold tooling costs
flexibility of tooling
flexibility in production: Neck inner diameters (I.D) can easily controlled to varying requirements. Bottle weights are adjustable.
container sizes can range from less than 1 oz. to 55 gallons and up
container shape is not restricted by blow-up ratios. Bottles can be long and flat or have handles.
wide selection of machine sizes: Molds can geared to volume requirements
Pharmaceutical products, consumable bottles
Carbonated and soft drink bottles
The polymer flows over shorter distance, thus reducing frozen in stress
Polymer is not forced through small gates which can lead to points of weakness inamolding.
Low mold maintenance costs.
Mold design is not complicated by spruce and runner layout
Its ability to mold large and fairly intricate parts
Difficult to control flash
Not suited for some types of parts
Rotational Molding Advantages
economically produced large products
minimum design constraints
no polymer weld lines
comparatively low mold costs
Reply With Quote The Following2Users Say Thank You to eikhinewai For This Useful Post:
pyaephyo3110, William Paul 09-01-2008 09:30 AM
Rep Power0ပြန်စာ -> Polymer Processing Techniques
အချိန်အားရင် တစ်ခုချင်း အကြာင်းကို ဆက်လက် ဖော်ပြသွား ပါဦးမယ်...............
အခုတော့ စာဖတ်လိုက် ဦးမယ် Reply With Quote 10-27-2008 04:01 PM
ဆက်ရေးပါအုံး frodo ရ မအားဘူးထင်တယ်... အားရင်ဆက်ရေးနော် ...
Reply With Quote 02-24-2014 11:55 PM
Rep Power0ယနေ့ခေတ် အချိန်အခါတွင် polyethylene ကို plastic production နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။ polyehtylene ကို High,low, medium pressure သုံးမျိုးတွင် polymerization(ပိုလီမာပြုလုပ်ခြင်း) လုပ်နိူင်သည်။ polyethylene ပြုလုပ်ရာတွင် အခြေခံအားဖြင့် ethylene ကို method အမျိုးမျိုးဖြင့် structure and properties များပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ပြုလုပ်နိူင်သည်။ Method တစ်ခု၏အောက်တွင်ပင် temperature, pressure စသည့် condition များပေါ်တွင် မူတည်၍ မူကွဲ products များထွက်နိူင်သေးသည်။ အဓိက အားဖြင့် structure and properties များ ကွဲပြားနိူင်သည်။ High pressure အောက်တွင် ethylene ကို polymerization ပြုလုပ်၍ ရရှိသော polyethylene ကို Low Density Polyethylene LDPE ဟုခေါ်သည်။
pressure range မှာ 100 မှ 300 MPa ဖြစ်သည်။ polymerization method မှာ များသောအားဖြင့် vinyl compound များပါဝင်သော Free Radical Mechanism method ကို အသုံးများပါသည်။ ဤနည်းတွင် တွေ့ရသော ထူးခြားချက်မှာ concentration of monomer သည် ရရှိလာသော product ၏ molecular mass ကို လွှမ်းမိုးသည်ဟူသော အချက်ဖြစ်သည်။ conc မြင့်သော monomer များကို အသုံးပြုလျှင် high molecular polyethylene ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ polymerization ပြုလုပ်စဉ်အတွင်း pressure သည်လည်း process ကို လွှမ်းမိုးမှုရှိနေသည်။ pressure မြင့်လေ product ၏ density မြင့်တက်လာလေဖြစ်သည်။ tempreature ကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့်လည်း density of polyethylene ကို မြှင့်တင်ပေးနိူင်ပါသည်။ ဤ process ကို Temperature 80 မှ 300 C ကြားတွင်ပြုလုပ်ပါသည်။
(ဒီခေါင်းစဉ်လေးတွေ့လို့ ဒီအောက်မှာပဲ ၀င်ရေးဖြစ်သွားပါသည်။ ကြုံရင်ကြုံသလို ၀င်ရေးသွားပါဦးမည်။)
Reply With Quote The Following5Users Say Thank You to nayzaw3053 For This Useful Post:
konge, phoelapyae, pyaephyo3110, William Paul, yeakharr 02-25-2014 06:33 AM
Posts 771	Thanks 230
Rep Power 10 ကျေးဇူးပါဗျာ.. အတတ်ပညာ အတွေ့အကြုံ ပညာရပ် တွေမျှဝေတဲ့အတွက်။
Reply With Quote The Following2Users Say Thank You to konge For This Useful Post:
phoelapyae, William Paul 03-18-2014 12:03 AM
Rep Power0ပိုလီမာအမျိုးအစားများထဲမှ ဟိုင်ဒရိုဂျင်နှင့် ကာဘွန်နှစ်မျိုးထဲသာပေါင်းစပ်ထားသောပိုလီမာများကို polyolefin ဟုခေါ်သည်။
polyethylene သည်လည်း polyolefin အုပ်စုထဲတွင် တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်သည်။ ထိုပိုလီမာများသည် semi-crystalline ပိုလီမာများဖြစ်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာ ပိုလီမာများသည် လုံးဝ crystall ဖြစ်သွားသည်ဟုမရှိပေ။ ပိုလီမာများတွင် amorphous အခြေအနေသည် အနည်းနှင့်အများရှိနေတတ်သည်။
ပိုလီအီသိုင်လင်းမှာ လူသိများသော ပိုလီမာဖြစ်သည်။ ၄င်း၏ ကမ်မစ်ကယ် ဖော်မျူလာမှာ (CH2-CH2)n ဖြစ်သည်။ PE ပိုလီအီသိုင်လင်းသည် non polar material ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၄င်းသည် common solvent and hardly swells များတွင် မပျော်ဝင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ပိုလီအီသိုင်လင်းမှ ထုတ်လုပ်သော ပိုက်များအချင်းအချင်းဆက်
သည့်နေရာတွင် ကော် သို့ အရည် cement တစ်ခုခုနှင့်ဆက်၍မရပါ။ ဤနေရာတွင် အသင့်တော်ဆုံးနည်းလမ်းမှာတော့ အပူပေး၍ဆက်ခြင်းဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်နှင့် ဆက်ခြင်း
၃-အပူချိန်ကို -၅၈ မှ ၁၄၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ကြားတွင် ခံနိူင်ရည်ရှိခြင်း
၆-ပွတ်တိုက်မှုဒဏ်ကိုလည်းကောင်းစွာခံနိူင်ရည်ရှိခြင်း (ပိုက်ထဲတွင် အရည်များဖြတ်သန်းစီးဆင်းသောအခါ)
၇-ကမ်မစ်ကယ် ပစ္စည်းများဖြတ်သန်းစီးဆင်းရာတွင်လည်း ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုနိူင်ခြင်း
ပိုလီအီသိုင်လင်း များထဲတွင် ပိုလီအီသိုင်လင်းအမှတ် ၁၀၀ သည် ပိုက်များထုတ်လုပ်ရာတွင် ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ ၄င်းကို PE 100 ဟု လွယ်ကူစွာ ခေါ်လေ့ရှိသည်။ မော်ဒန် PE 100 များသည် bimodal မော်လီကျူးများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်ကများသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၄င်း ပိုလီမာထဲတွင်
မတူညီသော မော်လီကျူးဆက်တန်းနှစ်မျိုးပါသည်။ မော်လီကျူးဆက်တန်းအရှည်နှင့်အတိုဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော ပိုလီမာများမှပြုလုပ်သော ပစ္စည်းများသည်
ဆွဲဆန့်နိူင်အား တော်တော်လေးမြင့်မားသည်။ ထို့အပြင် ကွဲအက်ခြင်း ကျိုးကြေခြင်းများလည်းတော်ရုံနှင့်မဖြစ်ပေါ်နိူင်ပါ။ ထို့အပြင် ၄င်းပိုလီမာသည် ၄င်းခံနိူင်ရည်ရှိသော
အပူအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်းတွင် ပြင်ပ မှသက်ရောက်သော ဒဏ်များကိုလည်းကောင်းစွာခံနိူင်သည်။ လက်တွေ့နယ်ပယ်တွင်တိုင်းတာချက်များအရ ပိုလီအီသိုင်လင်း
၁၀၀ သည် မျက်နှာပြင်ထိခိုက်မှုတွင် အညှာလွယ်သော အမျိုးအစားမဟုတ်ပေ။ Bimodal PE များသည် non polar သဘာဝများဖြစ်သည်။ non polar ဆိုသည်မှာ မော်လီကျူးအတွင်း အက်တမ်များအချင်းအချင်း တူညီသော အီလက်ထရွန်ကို
ရှယ်ထားသည်။ ထိုသဘောသဘာဝကြောင့် ၄င်းပိုလီမာများသည် ကမ်မစ်ကယ်ပစ္စည်းများ၏သက်ရောက်မှုကိုကောင်းစွာခံနိူင်ရည်ရှိသည်။ ပိုလီအီသိုင်လင်းသည် အက်စစ်များ
အယ်လ်ကာလိုင်းအရည်များ၊ ပျော်ရည်အမျိုးမျိုးနှင့် အရက်များ ရေများတွင် မပျော်ဝင်နိူင်ပါ။ အဆီများကတော့ ပိုလီအီသိုင်လင်းကို အနည်းငယ်ပွရောင်းစေနိူင်သည်။ ပိုလီအီသိုင်လင်း
သည် oxydizing acids ketones aromatic hydrocarbon chlorinated hydrocarbon စသည်များ ကိုတော့ခံနိူင်ရည်မရှိပေ။
စမ်းသပ်တွေ့ရှိချက်များအရ ပိုလီအီသိုင်လင်းသည် သံနှင့်အခြားပလပ်စတစ် များထက်ပို၍အသုံးပြုရတာ အဆင်ပြေပါသည်။ ၄င်းမှပြုလုပ်ထားသော ပိုက်များသည်
အရည်အမျိုးမျိုးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင် ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြူသည်။ အခြားပလပ်စတစ်ပစ္စည်းများကဲ့သို့ပင် ပိုလီအီသိုင်လင်းသည်လည်း နေရောင်ခြည်မှ UV ray နှင့်
အောက်ဆီဂျင် တို့ကြောင့်အနည်းငယ်ထိခိုက်မှုများ အရည်အသွေးကျဆင်းမှုများဖြစ်နိူင်သည်။ ၄င်းပြသနာကို carbon black ကို ပိုလီမာအတွင်းပေါင်းစပ်ပေးခြင်းဖြင့် UV exposure ကို ခံနိူင်ရည်ရှိစေသည်။
ပိုလီအီသိုင်လင်းပိုက်များကို အပူချိန် -58 မှ 140 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ကြားတွင် အသုံးပြုနိူင်သည်။ ၄င်း၏အပူလျှောက်ကူးမှုနှုန်းမှာ 2.7BTU-in/sqft/hr/deg F ဖြစ်သည်။
ဤကဲ့သို့ အပူချိန်ကိုကောင်းစွာ ခံနိူင်ရည်ရှိသောကြောင့် ပိုလီအီသိုင်လင်းပိုက်များသည် အခြား စတီးလ် သံ စသည်များကဲ့သို့ အပူအတွက်ထပ်မံ၍ ကာထားရခြင်းများစသည် အထွေအထူးမလိုအပ်ပါ။ ထိုအချက်ကလည်း
စီးပွားေ၇းအရ တွက်ခြေကိုက်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်လာသည်။ ပိုလီအီသိုင်လင်းသည် အောက်ဆီဂျင် 17% ထက်ကျော်သော အခြေအနေတွင် မီးလောင်လွယ်သော ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပိုလီအီသိုင်လင်းမီးလောင်သောအခါ
အဆိပ်ရှိဓာတ်ငွေ့များထွက်နိူင်သည်။ အထူးသဖြင့် ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ် သည် လူတို့အတွက် အဆိပ်ပြင်းသော ဓာတ်ငွေ့တစ်မျိုးဖြစ်သည်။
ပိုလီအီသိုင်လင်းသည် အပူချိန် 662 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တွင်ကိုယ်တိုင်မီးလောင်နိူင်သည်။
ပိုလီအီသိုင်လင်းသည် အရည်စုပ်ယူမှုအားလည်း အလွန်းနည်းသည်။ ထို့ကြောင့် ၄င်းကိုယ်တိုင်သည် လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုမရှိပေ။ ထို့အတွက်ကြောင့် ၄င်းအတွက်
ပြင်ပ လျှပ်ကာပစ္စည်းများထပ်မံအုပ်ကာပေးရန်မလိုအပ်ပေ။	မှတ်ချက်=ရုရှားဘာသာမှ ပြန်ဆိုပါသည်။
Reply With Quote The Following3Users Say Thank You to nayzaw3053 For This Useful Post:
phoelapyae, William Paul, yeakharr 01-23-2015 08:20 AM
Rep Power0PVC pipe production လေးအကြောင်းသိသူများေ၇းပေးကြပါ
Signal Processing / Digital Signal Processing နဲ့ပတ်သက်သမျှ
By nyi.nyi in forum အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာပညာ
Last Post: 06-03-2013, 08:43 AM
Applied Speech and Audio Processing: With Matlab Examples
By ကိုဦး in forum MatLab
Last Post: 08-16-2010, 10:03 AM
Digital Image Processing Using matlab ကို ဒီနေရာမှာ မျှဝေကြပါ။
By ၀င်းထက်အောင် in forum MatLab
Last Post: 03-14-2009, 09:26 AM
Wiley, Agile Database Techniques Effective Strategies (2003) Lotb
By yartar in forum Programming/Web Programming ဆိုင်ရာစာအုပ်များ
Last Post: 05-12-2008, 04:51 PM
All times are GMT +6.5. The time now is 11:16 PM.